Gbanwee ngwanrọ njikwa | Motadata
Ngwanrọ njikwa mgbanwe IT
Jikwaa mgbanwe IT na-enweghị ọgba aghara
Ngwá ọrụ njikwa mgbanwe ITIL na-elekwasị anya na imekọ ihe ọnụ, nghọta na akpaaka na-ebute usoro.
Malite maka n'efu
Wepụ ihe ize ndụ na
Njikwa mgbanwe IT
Wedata ihe ize ndụ na mmetụta nke mgbanwe na akụrụngwa IT gị site na iji modul njikwa mgbanwe nke ITIL jikọtara ọnụ nke nwere ọkwa raara onwe ya nye iji weta njikwa na ịbawanye arụmọrụ nke mwepu ọ bụla.
Sochie mgbanwe site na Ọtụtụ ọkwa
Kwe ka ndị njikwa mgbanwe gị hụ mgbanwe anya site na:
Ọkwa ndị pụtara ìhè
Nkwenye dabere na ọkwa
Nsochi mmekọrịta na modul ITIL ndị ọzọ
Mara gbasara omume kacha mma maka njikwa mgbanwe
Wepụta mgbanwe ndị ga-ebute ụzọ dabere na Gbanwee Ụdị
Mgbanwe dị mfe dị iche iche ebe ọ bụ na ọ bụghị mgbanwe IT niile bụ otu.
Mepụta mgbanwe ọkọlọtọ
Mepụta mgbanwe mberede
Mepụta Mgbanwe Dị Mkpa
ebute ụzọ ka mma
Nlekọta ka mma
Marakwuo banyere mgbanwe na njikwa mwepụta
Jiri jikwaa Mgbanwe Akpaaka dị elu
Mee ka njikwa usoro ndụ nke mgbanwe gbanwee site na iji usoro ọrụ na nkwenye.
Njirimara mgbanwe akpaaka dabere na mmemme
Ogbo raara onwe ya nye maka nkwado
Ozi maka mmemme mgbanwe dị egwu
Njikwa ka mma
Nweta nghọta na Gbanwee ozi
Nweta ozi dị mkpa na usoro mgbanwe ọ bụla.
Nkeji ewepụtara maka nhazi oge na atụmatụ mbugharị
Ụzọ nyocha iji soro mgbanwe
Kenye CAB na mgbanwe
Ịnweta ozi dị mfe
Mkpebi ngwa ngwa
Melite nke gị
Arụ ọrụ Site na 30%
Ihe mgbako ROI
Ndị ọzọ atụmatụ
Weta omume mgbanwe ọkọlọtọ n'ime ụlọ ọrụ gị iji wedata ihe egwu yana ijide n'aka.
PinkVERIFY modul enwetara ikike yana usoro ITIL kwadoro.
Gbanwee Board Advisory
Kenye onye nrụpụta, njikwa, na onye nleba anya mgbanwe.
Jiri akụrụngwa kọọ mgbanwe na CMDB.
Ikpo okwu na-enye ohere ka ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na mgbanwe.
Debe ma lelee akụkọ ọrụ nke ndị metụtara ya.
Mepụta arịrịọ mgbanwe site na ndebiri nwere nkọwa akọwapụtara nke mbụ.
Hazie mgbanwe dabere na gburugburu ebumnuche.
Hazie ụdị mgbanwe site na iji ihe nrụpụta ndọkpụrụ.
Tọọ mpaghara achọrọ maka ọkwa ọ bụla.
Desktọpụ ọrụ IT, ntuziaka zuru oke
Ntuziaka iji kwụọ ụgwọ nnyefe ọrụ IT gị.
Ngwọta zuru oke maka otu gị niile
Modul ServiceOps ndị ọzọ
Akụrụngwa njikwa tiketi
Mee RCA na ihe ndị metụtara ya
Jikwaa ibunye atụmatụ ọhụrụ na ngwa azụmahịa gị
Jikwaa ihe ọmụma nhazi
Mechie usoro nlekọta kwachie
Njikwa arịa mmụta ego
Jikwaa usoro ndụ nke ngwaike na akụrụngwa ngwanrọ
Hazie ma rụọ ọrụ ọhụrụ
Kwado ndị ọrụ njedebe ka ha nyere onwe ha aka
Ngwọta njikwa ọrụ IT dị mfe iji, dị mfe ịtọlite ​​​​ma nwee ihe niile ịchọrọ iji nye ahụmịhe nnyefe IT enweghị nkebi.
Gbalịa ServiceOps maka ụbọchị 30
Budata ngwanrọ anyị n'efu maka ụbọchị 30
Gbalịa ugbu a
Hazie ngosi ya na ọkachamara anyị
Detuo oghere na kalenda anyị yana ahụmịhe ServiceOps dị ndụ.
Dutọ oge ugbu a
Kpọtụrụ maka ire ere
N'agbanyeghị, nwee ajụjụ? Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ị nwere ajụjụ ọ bụla? Biko jụọ ebe a anyị dị njikere inyere gị aka
Ọ bụrụ na edepụtaghị ajụjụ gị ebe a, biko nweere onwe gị iru.
Jụọ ajụjụ gị
Kedu ụdị mgbanwe dị iche iche?
Enwere ụdị mgbanwe isi atọ - Standard, Normal, and Emergency Change.
Mgbanwe ọkọlọtọ bụ ụdị mgbanwe akwadoro, nke nwere obere ihe ize ndụ nke na-akwado ọrụ ugboro ugboro, edepụtara. Ngbanwe nkịtị, n'aka nke ọzọ, bụ ụdị mgbanwe dị n'etiti-ihe ize ndụ nke na-adịghị ngwa ngwa. Anabataghị mgbanwe a ma chọọ usoro nyocha nke ọma tupu nnabata. Ụdị mgbanwe nke atọ bụ mgbanwe mberede nke bụ ngwa ngwa, ụdị mgbanwe dị elu dị ka egwu egwu.
Kedu ọrụ dịịrị onye njikwa mgbanwe?
Onye njikwa mgbanwe na-eje ozi dị ka onye nhazi ma na-ahụ maka usoro njikwa mgbanwe niile. Ọrụ ya bụ isi gụnyere inye ikike na ịkwado mgbanwe ndị dị ala, ịhazi na ịkwado nzukọ na Change Advisory Board (CAB) iji dozie mgbanwe ndị dị ize ndụ, na-ekpebi ma ọ ga-emejuputa ma ọ bụ jụ mgbanwe, na-ahụ na ọrụ niile e mere atụmatụ ime mgbanwe ahụ bụ. na-agbaso ụkpụrụ mgbe ị na-eguzobe, na-aghọta, na nyochaa atumatu na usoro, na-akwadebe akwụkwọ mpịakọta mgbanwe nke gụnyere nchịkọta RFC niile iji nyere CAB aka ịghọta na nyochaa mgbanwe a chọrọ.
Kedu ihe dị iche n'etiti ihe omume, nsogbu na njikwa mgbanwe?
A kọwapụtara ihe merenụ dị ka nkwụsịtụ a na-atụghị anya ya na ọrụ ma ọ bụ ịdaba n'ịdị mma ọrụ yana nsogbu bụ ihe kpatara ma ọ bụ nwere ike ịkpata ihe omume ugboro ugboro ebe mgbanwe bụ nkwalite, mgbanwe, ma ọ bụ mkpochapụ ihe ọ bụla nwere ike ịnwe kpọmkwem ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè. mmetụta na ọrụ na-aga n'ihu. Nlekọta ihe mberede bụ usoro mmeghachi omume mgbe nsogbu na usoro nlekọta mgbanwe na-arụ ọrụ yana imeghachi omume na okike.
Usoro njikwa ihe omume bụ iweghachi ọrụ nkịtị ozugbo enwere ike ebe oke njikwa nsogbu bụ ịchọpụta isi ihe na-akpata ọgba aghara ọrụ. Usoro njikwa mgbanwe, n'aka nke ọzọ, na-eme mgbanwe iji dozie ihe kpatara ya iji zere nkwụsị ọzọ na ọrụ ọrụ nkịtị.
Kedu ụfọdụ omume kacha mma njikwa mgbanwe?
Usoro njikwa mgbanwe ITIL kacha mma gụnyere ịghọta ihe kpatara eji akwado mgbanwe ahụ. Arịrịọ mgbanwe ọ bụla kwesịrị ka enyocha ya na uru ọ na-enye yana ụdị ihe egwu ọ na-eweta. Mgbe ha ghọtachara ebumnobi nke mgbanwe a, ndị otu nwere ike wepụta mgbanwe site na iji KPI na metrik dabara adaba. Gbanwee metrik nwere ike inye aka n'ịsochi usoro na-aga n'ihu, na-enye ozi gbasara oke akụrụngwa, yana tụọ arụmọrụ mgbanwe.
Ntụle IT na-ebu amụma nwere ike mee ka ụlọ ọrụ nwee ike ịkọwapụta ihe egwu mgbanwe wee ghọta mmetụta ha na ọrụ ọrụ nkịtị. Nke a na-enyere nzukọ ahụ aka ịchọpụta nzaghachi kwesịrị ekwesị dị ka ịnakwere ihe ize ndụ mgbanwe, ibelata ihe ize ndụ site n'ịgbanwe mgbanwe ma ọ bụ igbochi ihe ize ndụ site n'ịkwụsị mgbanwe ahụ kpamkpam ruo mgbe ọ na-eweta obere ihe ize ndụ. N'ikpeazụ, mgbanwe ọ bụla kwesịrị inwe usoro mmechi ma ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị.